Ogaden News Agency (ONA) – Shirkad Shidaalka Qoda oo laga leeyahay Brasil oo rabta woynaha inay heshiisyo lagasho
Shirkad Shidaalka Qoda oo laga leeyahay Brasil oo rabta woynaha inay heshiisyo lagasho
Shirkada Shidaalka Baadha ee Petroleo Brasileiro SA ee oo Wadanka Barazil uu iska leeyahay ayaa bayaamiysay inay heshiisyo lagalayso Wadanka Ethiopia si ay shidaal ugasoo saarto wadankaas. Shirkada ayaa sidoo kale sheegtay inay Bariga Afrika oo idil ay baadhitaano kasameyn doonto marka laga reebo wadanka Uganda.
Taliska Ethiopia ayaa dhinacooda sheegay in wax heshiis ah oo ay lagaleen shirkado shidaal ah waqtigan jirin oo hakad lagaliyay heshiisyada noocaas oo kale laga bilaabo intii ka danbeysay dhimashadii Males Zenawi mudadaas oo wadanka dhan ee Ethiopia shaqoyinka oo idil hakad lagaliyay.
Shirkadan ayaa sheegin in Dhulka Ogadeniya meelaha ay wax kaa badhayso ay kamid tahay heshiisyada ay lagalayso Ethiopia. Ogadeniya ayaa waxaa ka cararay shirkadihii shidaalka iyada oo shirkadi China laga lahaa ay sanadkan June ka baxday Ogadeniya.
Ethiopia oo aan awood u laheyn inay dhulkaas shidaalkisa ku soo saarto ayaa kolba shirkado shisheeye keenta kadibna ku fashilanta. Jabhada ONLF ayaa ka hortaagan Ethiopia in shidaalka Ogadeniya iyo kheyraadksia kaleba la baxdo. Illa qadiyada Ogadeniya la xaliyo suurto gal maahan in Kheyraadka Ogadeniya lasoo saaro.